Fitaterana an-tsokosoko Nafangaro tamin’ny trondro ny olona
Fiara fourgon iray no tratra niditra an-tsokosoko tany amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana afaka omaly.
Fifamoivoizana an-dranomasina Nirehitra am-pandehanana ny sambo « Shanny »
Tra-doza an-dranomasina ny sambo « Shanny ». Teo Kingalahy Kaominina Tambohorano andalana hiazo an’i Mahajanga ity sambo ity no tra-doza ny alin’ny 2 hifoha ny 3 jolay tokony.
Tanjombato Torana ilay lehilahy lehibe nofaohan’ny moto
Nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly maraina teny Tanjombato. Lehilahy lehibe iray manodidina ny 50 taona raha tombanana no nofaohan’ny moto tampoka raha variana nivarotra aron-tava mandehandeha teny amin’iny lalana iny.
RNT12A - Vangaindrano sy Tolagnaro Miverina amin'ny laoniny ny fifamoivoizana
Efa niverina nanomboka ny marainan’ny alatsinainy 06 jolay 2020 ny fifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena RNT12A mampitohy an’i Vangaindrano amin’i Tolagnaro rehefa nisy fahatapahana nanomboka ny alakamisy 02 jolay 2020 noho ny fahasimban'ny Bac eo Ebakiky, PK45+000.
Taksibe zotra F Mampitaintaina sy mampitaraina mpanjifa
Mampitaraina sy mampitaintaina mpanjifa ny fiasan’ireo taksibe zotra F miala eo amin'ny CNaPS Ampefiloha mankany Ambatofotsy.
Distrikan’Andapa Hisitraka ny tetikasa rarivato ihany koa
Hahazo anjara 2,5 kilaometatra amin’ilay tetikasa rarivato ihany koa ny ao amin’ny distrikan’Andapa,
Ambatomirahavavy- Imerintsiatosika Tsy mahazo mitatitra olona ny Moto sy Bisikileta
Taorian` ireo fepetra noraisina tamin` ny filankevitry ny minisitry ny sabotsy lasa teo, manoloana ny fihanaky ny aretina COVID-19, dia nanapaka ny teo anivon` ny faritra Itasy fa voarara ny fitaterana olona eo anelanelan` Ambatomirahavavy sy Imeritsiantosika.
Ny 28 martsa lasa teo no nitranga ny tantara teny Ampasampito, ilay miakatra avy any Nanisana iny. Roa volana taty aoriana ilay lietnà vao nitory. Soa ihany anefa fa nisy mpanao gazety tao anatin’ilay fiara fitaterana nandrakitra tamin’ny alalan’ny feo ny zava-nitranga rehetra ka izay no nentina nanaovana porofo teny anivon’ny fitsarana nahafahana nanafaka madiodio ilay mpamily. Tafiditra tao ny fitenin’ilay lietnà izay niraikitra nandritra ny resaka nataony. Ankehitriny, misy mbola mikasa hanenjika indray ity mpamily ity. Mihaodihaody eny amin’ny toby fiantsonan’ny 194 mantsy ireo vavolombelona mpandainga nalain’ilay lietnà tamin’ny fotoana nitrangan’ny raharaha. Tsy miala amin’io manamboninahitra io izy ireo raha misy mahazo ny havany sy ilay fiara entiny. Nolazain’ilay lietnà fa nanompa reny sy anabavy azy ary nandrahona hanimba ny fiarany sy nitarika olona hanao herisetra moa no nahafahany nampiditra am-ponja ilay mpamily teny am-piandohana.